အိန္ဒိယ: ဆောက်လုပ်ရေးဂြိုလ်သား '' Lynch '', အိန္ဒိယရဖျက်ဖို့ကမသုံးကြဘူး: Bhagwat | အိန္ဒိယသတင်း - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ "အိန္ဒိယ: အဆိုပါဂြိုလ်သားအဆောက်အဦး '' Lynch '', အိန္ဒိယရဖျက်ဖို့ကမသုံးကြဘူး: Bhagwat | အိန္ဒိယသတင်း
အိန္ဒိယ: ဆောက်လုပ်ရေးဂြိုလ်သား '' Lynch '', အိန္ဒိယရဖျက်ဖို့ကမသုံးကြဘူး: Bhagwat | အိန္ဒိယသတင်း
Nagpur: Mohan Bhagwat, Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS ကို) ၏သမ္မတဦးသိန်းစိန်အင်္ဂါနေ့ကပေါ်ဖြစ်ရပ်များ "တစ်ဖက်သတ်" မဟုတ်ကြနှင့်အသုံးပြုသောအသုံးအနှုန်း "Lynch" ကိုကန့်ကွက်ကြောင်းအတည်ပြုနေစဉ်အုပ်စုများကကျူးလွန်ကြီးထွားလာလမ်းကြောင်းသစ်လုပ်ကြံမှုကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချ အုပ်စုတစ်စုအကြမ်းဖက်မှုများသည်။ , ဒီအသုံးပြုမှုကိုတိုင်းပြည်နှင့်တစ်ခုလုံးကိုဟိန္ဒူအသိုင်းအဝိုင်းရဖျက်ဖို့နဲ့အကြားကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ရှိအောင်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းခဲ့ကြောင်းဟုဆိုကာ "လို့ခေါ်လူနည်းစုအသိုင်းအဝိုင်း။ "
"ကျနော်တို့ကဤအကြမ်းဖက်လိုတဲ့သဘောထားကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေး eroding အားဖြင့်ဥပဒေနှင့်အမိန့်နှင့်စေသောဖျက်ဆီး၏ကန့်သတ်ကျော်လွန်သွားပြီဝန်ခံရပါမည်။ ဤသည်လမ်းကြောင်းသစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကို၏အစဉ်အလာမရှိ, ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ဝိညာဉ်ကိုက်ညီတဲ့ပါဘူး, "Bhagwat Nagpur ရှိ Reshmibagh မြေပြင်မှအစာကျွေးဖို့ခါတိုင်းလိုမိန့်ခွန်း Vijaydashmi uttering ကဆိုသည်။
"ဘာပဲထင်မြင်ချက်၏အတိမ်အနက်ကိုကွဲပြားခြားနားမှု, ဘာပဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်နိုငျခဲ့ကွောငျးလိုက်စားအရေးယူကျနော်တို့ရဲမှအမှုပျ, ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ကန့်သတ်အတွင်းပြုမူနှင့်သင့် system ပေါ်တွင်အနားယူနေဖြင့်ရမယ် တိုင်းပြည်တရားစီရင်ရေး။ "Bhagwat gau-rakshaks အားဖြင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုမှတစ်ဦးကိုကိုးကားအဖြစ်မှတ်ဘာကပြောကြားခဲ့သည်။ Bhagwat အဆိုပါ Sangh ထိုကဲ့သို့သောအကြမ်းဖက်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုကူညီပံ့ပိုးမပြုခဲ့ခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ် "ဟုတိုင်းအဖြစ်အပျက်။ "
သို့သော် Bhagwat အပြစ်တင်တစ်ခုတည်းအသိုင်းအဝိုင်းတွေကပေါ်ကနေမဟုတ်ခဲ့ခြင်းနှင့်လူအစုအဝေးတို့ကအကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်ပွားသည့်အစီရင်ခံစာများစိန်ခေါ်ကြောင်းပြောဆိုထားသည်။ "ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်များကသူတို့ကိုလူမှုရေးအကြမ်းဖက်မှု၏သားကောင်များအောင်, အခြားအသိုင်းအဝိုင်းများကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ထိုသို့သောဖြစ်ရပ်များတဦးတည်းတဖက်သတ်မရှိကြပေ။ ဒါဟာပြည်နယ်နှင့်အခြားစွပ်စွဲချက်များနှင့်ဆန့်ကျင်-စွပ်စွဲချက်ဖြစ်စဉ်များထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။ ဒါဟာအစအခြားသူတွေတစ်ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်လမ်းအတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေစဉ်တွင်အချို့သောဖြစ်ရပ်များတမင်တကာ, ထုတ်လုပ်ခဲ့ပေါ်ထွက်လာ, "ဟု၎င်းကပြောသည်။
အဆိုပါ RSS ကိုခေါင်းဆောင်လူအစုအဝေးတို့ကအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်များဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရသည်ဟုဆန့်ကျင် "Lynch ။ " Lynch "၏ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်စဉ်များ labeling အားဖြင့်" "တခြားကနေနိုင်ငံခြားထုံးတမ်းစဉ်လာနှင့်အ Bharat သတ်မှတ်, အားထုတ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုနှင့်ဟိန္ဒူလူ့အဖွဲ့အစည်းရဖျက်နှင့်ဒါခေါ်လူနည်းစုအသိုင်းအဝိုင်းအကြားကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ဖနျတီးဖို့ဆဲဖြစ်ကြောင်း" သူကပြောပါတယ်။
Bhagwat ကိုလည်း၏အားသာချက်ကိုယူပြီးအားဖြင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအကြားထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားနေကြသူ "လို့ခေါ်ခေါင်းဆောင်များ" ၏ "အကြံစည်မှု" ၏မိနျ့တျောမူ၏ "ဘာသာစကားနှင့်လိုက်စားလုပ်ရပ်တွေကို။ " သူက "လုံလောက်သောဥပဒေများကိုထိုကဲ့သို့ဖြစ်ရပ်များတိုက်တိုင်းပြည်အတွင်းတည်ရှိနေ။ သူတို့ကတင်းကြပ်စွာနှင့်ရိုးသားစွာလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ "
Bhagwat ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်အားဖြင့် RSS ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့ stabbing တိုက်ခိုက်မှုများ၏အခြေအနေတွင်စကားပြောခဲ့ပါသည် Imran Khan အဘယ်သူသည်ပြီးခဲ့သည့်လကကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ addressing, ဟိန္ဒူ hegemony တည်ထောင်ရန်လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုအင်ဂျင်နီယာအစီအစဉ်နှင့်အတူတစ်လူမျိုးရေးခွဲခြားအဖွဲ့အစည်း Sangh ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ Sangh ၏ခေါင်းသည် RSS ကိုအိန္ဒိယတစ်ဦး "ဟိန္ဒူ Rashtra" ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အခိုင်အမာယုံကြည်ခဲ့ဟုဆိုသည်။ "ဒီရူပါရုံကိုနှင့်လူမြိုး၏ဝိသေသလက္ခဏာ ပတ်သက်. Sangh ၏ကွှေးကျွောခွငျး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုရေးဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်တိုင်းပြည်၏ဇာတ်ကောင်များ၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစဉ်းစားဟန်နှင့်ကုမ္ပဏီ Hindustan ဘာရတ်ဟာဟိန္ဒူ Rashtra ဖြစ်ပါတယ်" ဟုပြုလျက်, ်. ဟုပြောသည်။ ။ သို့သော်သူကဟိန္ဒူဖွစျကွောငျးကို RSS များ၏ concept ကိုတစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဘာသာရေးကိုကျင့်သုံးသူတို့အားကန့်သတ်မဟုတျကွောငျးကဆက်ပြောသည်။ သူဟာဟိန္ဒူဘာသာရေးဗဟုကြိုဆိုနှင့်ကယ်တင်ခြင်းသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာနည်းလမ်းတွေအပေါ်ဆုံးဖြတ်ကွဲပြားခြားနားသောလူများကထွက်ခွာသွားသူကဆက်ပြောသည်။
သူက "ဝါဒဖြန့်" အဖြစ်ကို RSS အစ္စလာမ်မုန်းတီးရေးပင်ဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကိုအပေါ်ခန်းရဲ့အခိုင်အမာငြင်းဆိုလိုက်သည်။ "ဒါဟာအစ္စလာမ်ဘာသာအချို့သောကျူးကျော်မှတဆင့်အိန္ဒိယထံသို့ လာ. အဘယ်သူ၏အမှတ်တရများမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာကြာမြင့်စွာနေတိုက်ခိုက်နေရှိကွောငျးကိုမှန်သည်။ သို့သော်ဟိန္ဒူဘာသာ၏အပေါင်းစည်းရေးအစ္စလာမ်အတိုက်အခံများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ, "ဟု၎င်းကပြောသည်။
သူက ", ဘာရတ်အတွေးလုပ်ငန်းစဉ်၏ဦးတည်ချက်အတွက်အသွင်ပြောင်း" ကတောင်းဆို, RSS ကိုအထောက်အပံ့အတွက်တိုးအကွောငျးပွောနဲ့ဒီဇာတ်ထူးထူးအထွေထွေရှိငြားအမြတ်ထုတ်ခြင်းဖြင့်ကွဲပြားမှုကိုဖန်တီးရန်အားထုတ်မှုမှဦးဆောင်ခဲ့ပြီးသူကပြောပါတယ် အယူဝါဒ, ဘာသာစကားနှင့်ဒေသ။ "မူဝါဒများ, ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်ကောင်းမွန်စွာအဓိပ္ပာယ်ကြေညာချက်များပဋိပက္ခဖန်တီးဖို့အမြတ်ထုတ်နေကြတယ်" ဟုသူကဟိန်ဒီတွင်မကြာသေးမီကပဋိပက္ခမှတစ်ဦးကိုကိုးကားအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်ယျကပြောသည်။
Bhagwat pm တွင်ချီးကျူး Narendra Modi ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး Amit Shah က နှင့်ဆောင်းပါး 370 2019 ၏ဖျက်သိမ်းခြင်းများအတွက် BJP အခြားအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အာဏာရပါတီ၏မျက်နှာသာအတွက်စီရင်ချက်တစ်ခုထောက်ခံချက်ခဲ့ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ပထမငါးနှစ်အတွင်းမိုဒီအစိုးရရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်။ အပိုဒ် 370 annulling သည့်ဥပဒေပြဌာန်းရန်ရည်ညွှန်း Bhagwat ရွေးကောက်ခံအစိုးရတစ်ဖန်သူကမျှော်လင့်ချက်ဖြည့်ဆည်းဖို့နဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားရှိလူ၏ခံစားခကျြမြားနှငျ့ဆန္ဒကိုလေးစားဖို့သတ္တိရှိခဲ့ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
"ပုဒ်မ 370 ၏ဖျက်သိမ်းရေးအာဏာရပါတီ၏စိတ်ကူးရှိနှင့်ပြီးသားဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွမ်းကျင်စွာနှစ်ဦးစလုံးအိမ်များအခြားပါတီများ၏ထောက်ခံမှုအတူတကွဆောင်ခဲ့ဤအချိန်, အားကြီးသောယုတ္တိဗေဒနှင့်အများပြည်သူနှင့်အတူတစ်ဦးအသနားခံသဘောတူညီချက်နှင့်တကွ, အလုပ်အပါအဝင်ဖြစ်သောအာဏာရပါတီအဖွဲ့ဝင်များအဘို့ပြုလေ၏ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဝန်ကြီးပြည်ထဲရေး၏, နှင့်ပါလီမန်ထဲမှာပြည်သူ့သဘောထားကာကွယ်သူကိုအခြားနိုင်ငံရေးပါတီများချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရသင့်ပါတယ် "ဟု Bhagwat ကဆိုသည်။
နံနက် Bhagwat ကို 'shastra puja' 'ကွပ်မျက်ခံရ။ HCL ၏တည်ထောင်သူ Shiv Nadar ထိုအဖြစ်အပျက်၏အဓိကဧည့်သည်ယခုနှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ Nitin Gadkari VK Singh နဲ့မဟာရပ်ရှ CM Devendra Fadnavis ထိုအဖြစ်အပျက်မှာလက်ရှိသူတွေထဲမှာခဲ့ကြသည်။
အိန္ဒိယ: တရုတ် Imran J & K သည်၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန် resolution ကိုပြောပါတယ်အပြစ်တင် | အိန္ဒိယသတင်း
အိန္ဒိယ: RSS ကိုစီးပွားရေးကျဆင်းမှုတန်ပြန်ရန်နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် disinvestment ထောက်ခံပါတယ် | အိန္ဒိယသတင်း
Alain Souchonaparfois trouvé Emmanuel Macron “arrogant” et “maladroit”